Fampivoarana mialoha ny famonoana sinoa maty - Casting Minghe
Minghe dia mpamokatra serivisy manerantany manerantany ho an'ny vokatra maty marina. Miaraka amin'ny traikefa maherin'ny 35 taona amin'ny fikarohana & fampandrosoana, famokarana ary famokarana mazava ho an'ny orinasan-tsolika aliminioma, zinc ary manezioma maty, dia faly izahay miara-miasa amin'ireo orinasa mpamokatra fiara, injeniera, elektronika ary fifandraisan-davitra.
Manome ekipa injeniera efa za-draharaha, fitantanana teknika ary ekipa mpiantoka kalitao izahay vonona hanohana ireo tetikasa sarotra indrindra. Nanampy ny mpanjifa izahay tamin'ny alàlan'ny prototyp masinina, ny famolavolana maty, ny fitsapana vokatra betsaka ary ny fanamboarana ny volavola.
Manohana mpiasa efa ho 500, ny faritry ny oniversite anay 50,000 20 metatra toradroa dia avo indrindra, miaraka amin'ireo faritra famokarana izay misy milina famonoana 160T-1600T mandroso 50 mahery, foibe fametahana 3 + CNC, CMM lehibe XNUMX, ary milina maro hafa, anisan'izany ny : taratra x, spectrometre, tester de leak, ary mpanadio ultrasonic.
Nahazo mari-pahaizana ISO 9001, IATF 16949 izahay, ary manome vokatra 5,000 taonina vita amin'ny firaka vita amin'ny aliminioma isan-taona. Natokana ho an'ny 15% ny mpiasa izahay amin'ny ezaka fanaraha-maso ny kalitao ary hampihatra ny fanaraha-maso kalitao amin'ny dingana famokarana rehetra. Izahay dia manamboatra vokatra isan-karazany ao amin'ny tsenan'ny fiara, elektronika, fifandraisan-davitra ary ny motera elektrika. Ny ekipanay ao amin'ny MINGHE dia manolo-tena hanome anao ny vokatra tsara indrindra ho an'ireo tetik'asa mahazatra anao, amin'ny fampiasana ireo fitaovana sy teknika avo lenta indrindra misy ankehitriny. ao amin'ny faritra iray fantatra amin'ny fivoarana ara-teknika an'izao tontolo izao sy ny fahaizany manamboatra, ny fotodrafitrasa indostrialy ary ny tambajotra fitaterana logistika sy fitaterana. Izahay eto dia hamadika ny hevitrao ho tonga zava-misy haingana, marina ary amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Ny ampahany manary maty dia mety amin'ny indostria manaraka:
Orinasa mandefa maty tsy mahomby amin'ny vidiny eto Shina izahay, miaraka amin'ny vidin'ny fitaovana kely kokoa, ny tolotra anay dia manodidina ny 20% ambany noho ny orinasa maty maty sinoa hafa, ary 40% ny vidiny ambany noho ny orinasa maty casting tandrefana koa.
Fanohanana DFM sy injeniera maimaimpoana
Miaraka amin'ny traikefa manan-karena amin'ny famoahana ho faty, ireo injenierantsika mahay be dia be dia hanome soso-kevitra matihanina ho an'ny mpanjifanay rehetra. Ny DFM dia mety ho faritra fanariana maty na rafitra vokatra feno.
Ekipa fitantanana mifantoka amin'ny kalitao
Mifototra amin'i Shina aza isika, saingy manana rafitra matanjaka momba ny kalitao isika. Ny ekipa mpitantana anay dia hanara-maso ny asanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fiantohana vokatra avo lenta avoaka vokarina sy hatolotra ny mpanjifanay.
Fanamboarana bobongolo eo an-toerana
Fitaovana feno isika ary afaka manao lasitra mamoaka bobongolo marina ary ampahany amin'ny fenitra avo indrindra. Ireo mpanamboatra lasitra za-draharaha dia afaka mitantana ny endrika sarotra indrindra amin'ny fandeferana sy ny famaranana
Tonga eto izahay isaky ny mila izany ianao, ny fangatahana na fanontanianao dia horaisina ao anatin'ny 12 ora. Noho izany dia mikasa sy manaraka ny baiko tsirairay izahay ary manome antoka fa hatolotra ara-potoana ny entana.
Fitaovana fanariana maty maty 20 vita amin'ny 160ton ka hatramin'ny 3000T, milina cnc 53 set. IATF 16949 (VDA6.3) novaina voamarina, 15% ny mpiasa manontolo dia mpikambana ao amin'ny QC izay manara-maso ny fizotry ny famokarana manontolo.
Mino izahay fa ny andraikitry ny mpanamboatra dia ny fanomezana ho an'ny mpanjifa famatsian-vokatra avo lenta, ary hitarika andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiaraha-monina maharitra. Teknolojia mandroso sy teknolojia famokarana efa za-draharaha ho an'ny akora azo havaozina. Ireo matihanina manana asa-tanana dia manohitra ny asa-tanana. Izahay dia mikendry ny hahatsapa vokatra avo lenta izay sariaka amin'ny tontolo iainana. Izay ny "Minghe Casting" ataonay.
Fitaovana famokarana >>
Ny tantarantsika >>
Fiantohana kalitao >>
Fanambarana iraka >>